PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - UMOSIMANE AKENEME NGOKULAHLWA KWEBHOLA
UMOSIMANE AKENEME NGOKULAHLWA KWEBHOLA
Ilanga - 2018-10-29 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
UZWAKALISE ukungenami uPitso “Jingles” Mosimane ongumqeqeshi weMamelodi Sundowns ezakhe ziguqisa iChippa United ngo-1-0 wegoli likaGaston Sirino koweAbsa Premiership ngoMgqibelo ebusuku eSisa Dukashe Stadium, e-Eastern Cape.
IDowns iye kulo mdlalo kuvele kubhekwe ukuba iwunqobe kwazise iChippa kayenzi kahle kulezi zinsuku. Nakuba inqobile kodwa uMosimane uzwakalise ukungenami ngendlela ezakhe ezidlale ngayo.
“Umdlalo wethu ubungemuhle neze, besilahla ibhola singaphaselani ngendlela. Sisizwe yisipiliyoni sikaHlompho Kekana no-Andile Jali abebesibambe saqina isisu. UJali ubukeka engena egiyeni maduzane nje uzobuyela efomini aziwa ngayo. Kodwa-ke mukhulu umsebenzi osasihlalele njengoba sifuna ukuvikela isicoco sethu seligi,” kusho uMosimane.
U-Eric Tinkler ololonga iChippa, uncome ezakhe ngebhola ezilidlalile.
“Sikwenze konke kulo mdlalo. ISundowns besiyicindezela kwanqaba wona amagoli. Besazi ukuthi lo mdlalo uzokuba nzima kodwa sizamile. Ngibashayela ihlombe abadlali bami, benze iSundowns yabukeka iyikilabhu encane ekubeni inkulu. Sibhekene nesimo esinzima njengoba sesiyodlala neKaizer Chiefs kuzofanele silwe nakulo mdlalo. Kunzima ukubhekana namakilabhu amakhulu kulandelana kodwa-ke kufanele sidlale,” kusho uTinkler.
U-AUBREY Modiba emakwa nguLimbikani Mzava noNkanyiso Cele beGolden Arrows koweligi ophele ngo-1-1 izolo ngeSonto eMbombela Stadium.